Tom Wilkinson – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
SAS: Red Notice (2021) Unicode 2021 Match လထှကျ အသဈစကျစကျ Action ကားကောငျးလေးတငျပေးလိုကျပါတယျ။ Andy McNab ရဲ့ ရောငျးကားအကောငျးဆုံး စာအုပျကိုပွနျလညျရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ Grace Lewis ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးရာဇဝတျသားက ရထားတဈခုလုံးကို ဖောကျခှဲဖို့ ဓားစာခံတှဖေမျးထားတာကိုပွနျလညျကယျဆယျပီး Tom Buckingham တဈယောကျ အသကျရှငျဖို့ ကွိုးစားရတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ HD-Rip သာထှကျပေးတာမို့ Web-dl , BLu-ray တှလေောကျတော့ မကောငျးမှနျသေးပါဘူး။ Update Quality ရပါက ထပျပီးလုပျပေးပါမယျ ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖွဈပါတယျ Zawgyi 2021 Match လထွက် အသစ်စက်စက် Action ကားကောင်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Andy McNab ရဲ့ ရောင်းကားအကောင်းဆုံး စာအုပ်ကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Grace Lewis ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရာဇဝတ်သားက ရထားတစ်ခုလုံးကို ဖောက်ခွဲဖို့ ဓားစာခံတွေဖမ်းထားတာကိုပြန်လည်ကယ်ဆယ်ပီး Tom Buckingham တစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့ ကြိုးစားရတဲ့ ...
Rush Hour (1998) Unicode အငျစပကျတာ လီဟာ တရုတျနိုငျငံမှာ အငျမတနျတျောတဲ့စုံထောကျအရာရှိတဈဦးပါ..သူဟာ တရုတျ ကောငျစဈဝနျနားမှာအမွဲနပွေီး..ကောငျစဈဝနျကလညျးအရေးပေးပါတယျ..တဈနမှေ့ာ လီ ဦးဆောငျတဲ့ စုံထောကျအဖှဲ့ဟာတရုတျတှရေဲ့ရှေးဟောငျးပစ်စညျးကို ခိုးထုတျပွီးမှောငျခိုလုပျငနျးအကွီးအကယျြလုပျနေ တဲ့ ဂြှနျတာအို ရဲ့အဖှဲ့ကိုဖမျးမိပါတယျ.ခေါငျးဆောငျတော့မပါဘူးပေါ့….အဲ့အမှုပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ ဂြှနျတာအိုဟာ အတျောကွာခွရောဖြောကျနပေါတယျ..တရုတျကောငျစဈဝနျမှာသမီးလေးတဈယောကျရှိ ပါတယျ..အဲ့သမီးလေးကို ဂြှနျတာအို ဟာပွနျပေးဆှဲပွီး ကလဲ့စားပွနျလိုခငျြတဲ့အခါမှာတော့… တရုတျကောငျစဈဝနျဟာ အမရေိက ကိုရောကျနတောပါ..ပွနျပေးဆှဲတာလညျးအမရေိကမှာပဲဖွဈပါတယျ FBI က သူတို့အကောငျးဆုံးလုပျပေးမယျလို့ပွောပမေယျ့ကောငျစဈဝနျက ” လီ ” ကို ပါဝငျစခေငျြလို့ တရုတျကနလှေမျးချေါလိုကျပါတယျ..ဒါကို FBI က သဘောမကပြဲ တှဲဖကျတဈဦးတှဲပေးလိုကျပါတယျ.. အဲ့တှဲဖကျရဲ့တာဝနျကတော့ လီ ကို အမှုမှာ မပါဝငျစပေဲ ပထုတျထားဖို့ပဲဖွဈပါတယျ..တှဲဖကျကတော့ LA ရဲ ဘကျငှာန က ဂြိမျးကာတာပဲဖွဈပါတယျ..ပေါကျကရတှလြှေောကျပွောပွီး အူကွောငျကွောငျ နိုငျလှ တဲ့ ဒီရဲ အရာရှိနဲ့ တရုတျစုံထောကျ လီ တို့ပေါငျးမိပွီးဘာတှဖွေဈကွမလဲ.. ဘယျလိုတှစေုံစမျးမလဲ..ဘယျလိုတှအေလှဲတှေ..ဟာသတှဖွေဈမလဲဆိုတာ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပါ Credit Review Zawgyi အင်စပက်တာ လီဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အင်မတန်တော်တဲ့စုံထောက်အရာရှိတစ်ဦးပါ..သူဟာ တရုတ် ကောင်စစ်ဝန်နားမှာအမြဲနေပြီး..ကောင်စစ်ဝန်ကလည်းအရေးပေးပါတယ်..တစ်နေ့မှာ လီ ဦးဆောင်တဲ့ စုံထောက်အဖွဲ့ဟာတရုတ်တွေရဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းကို ခိုးထုတ်ပြီးမှောင်ခိုလုပ်ငန်းအကြီးအကျယ်လုပ်နေ တဲ့ ဂျွန်တာအို ရဲ့အဖွဲ့ကိုဖမ်းမိပါတယ်.ခေါင်းဆောင်တော့မပါဘူးပေါ့….အဲ့အမှုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဂျွန်တာအိုဟာ အတော်ကြာခြေရာဖျောက်နေပါတယ်..တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်မှာသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိ ပါတယ်..အဲ့သမီးလေးကို ဂျွန်တာအို ဟာပြန်ပေးဆွဲပြီး ကလဲ့စားပြန်လိုချင်တဲ့အခါမှာတော့… တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ဟာ အမေရိက ကိုရောက်နေတာပါ..ပြန်ပေးဆွဲတာလည်းအမေရိကမှာပဲဖြစ်ပါတယ် FBI ...
IMDB: 7.0/10 236591 votes
Batman Begins (2005) June 17 2005 မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီး Christopher Nolan ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Bat Man: Begins ဟာ ရုံဝင်ငွေ 374.2 million ရရှိခဲ့ပြီး DC Comics ကဇတ်ကောင်ကို အခြေခံထားတဲ့ super Hero ရုပ်ရှင်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bat Man လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Christian Bale ကိုမျက်စိထဲပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ အရင်ကလဲ Bat Man ဇတ်ကောင်ကို အလီလီရိုက်ကူးခဲ့ကြပေမဲ့ Christian Bale ကိုမမှိခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီကားကတော့ The greatest Detective လို့လူသိများတဲ့ Bat Man စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျည်းကတော့ Bat Man ဖြစ်လာမယ့် Bruce Wayne ဟာငယ်ငယ်ကလင်းနို့ကြောက်တတ်ပါတယ်။ သူ့အဖေ Thomas Wayne နဲ့ Martha Wayne တို့ဟာသန်းကြွယ်သူဌေးတွေဖြစ်ပြီး Wayne Enterprises လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ...
The Titan (2018) ဒီဇာတ်ကားကတော့ သိပ္ပံဇာတ်ကားတွေကိုရိုက်လေ့ရှိတဲ့ Avatar ထဲကမင်းသား Sam Worthington ကအထိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။အခုကားကလည်း သိပ္ပံဇာတ်ကားပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းကို အကျဉ်းကတော့….လူသားမျိုးနွယ်ဟာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြိုင်အဆိုင် စစ်မက်ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရင်းကနေ ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ မှီခိုအားထားရမဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုပါ ဖျက်ဆီးပစ်နေကြပါတယ်။အဲဒီလိုဖျက်ဆီးရင်းကနေ ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းစာလောက်က လူနေလို့မရတော့တဲ့ အခြေနေထိ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဒီတော့ နောက်လာမဲ့လူသားမျိုးဆက်အတွက် စဉ်းစားရတော့တာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ အမေရိကန်က ဇီဝသိပ္ပံပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပါမောက္ခကောလင်းဝုသ်က အဖြေတစ်ခုကို ရှာကြံခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့ စနေဂြိုဟ်ရဲ့ ဂြိုဟ်သိမ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Titan ဆိုတဲ့ဂြိုဟ်မှာ သွားနေဖို့ပြင်ဆင်တာပါ။အဲဒီ Titan ဂြိုဟ်က စင်္ကြဝဠာအဖွဲ့စည်းမှာ ဒုတိယအကြီးဆုံး ဂြိုဟ်တစ်လုံးပါ။ လေရှိတယ်၊ ရေရှိတယ်။လုပ်နေကြပုံစံအတိုင်းဆိုရင် နေထိုင်ဖို့အတွက် အဆောက်အဦးတွေ သီးသန့်ဆောက်လုပ်ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ကြာရှည်နေထိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် အလုပ်မဖြစ်ဘူးလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Titan မှာက အသက်ရှူဖို့အတွက် အောက်ဆီဂျင်က ၂၀% လောက်ပဲရှိတာ။ ကျန်တဲ့ ၈၀% လောက်က နိုင်ထရိုဂျင်တွေပေါ့။ရေဆိုရင်လည်း မီသိန်းအရည်တွေနဲ့ ပျော်ဝင်နေတာမို့လို့ ...
IMDB: 4.8/10 23,979 votes
Felony (2013) ကိုမာဝင်သွားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမှု့မှာ စုံထောက်သုံးယောက် ပါဝင်ပတ်သတ်လာပြီး တစ်ယောက်က ဒီအမှု့ရဲ့ တရားခံ နောက်တစ်ယောက်က ဒီအမှု့ကိုထိမ်ချန်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီး နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဒီအမှု့က ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ စုံထောက်သုံးယောက်ရဲ့ အရူပ်တော်ပုံကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရမဲ့ Thriller ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ imdb 6.1 အထိရရှိထားတဲံ ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ မကြည့်ရသေးသူများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
IMDB: 6.1/10 4,457 votes
The Patriot (2000) ၁၇၇၆ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီ ခေတ်မှာနေထိုင်တဲ့ ဘင်ဂျမင် မာတင်ဟာ French-Indian စစ်ပွဲမှာ သူရဲ့ရက်စက်မူတွေနဲ့ နာမည်ကျော်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ သူ့ရဲ့အတိတ်ကအပြစ်တွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မူ့ကနေ ဝေးဝေမှာနေလိုပြီး မိခင်မရှိတော့တဲ့ သူကလေး၇ယောက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်နေပါတယ်။ သို့သော်က မပါတ်သတ်လိုပေမယ့် ဂရိတ်ဗြိတိန်ရဲ့လက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးကို ရယူဖို့ တော်လှန်မူမှာ တောင်ကာရိုလိုင်နား က ဝင်ရောက်ပူပေါင်းခဲ့ရာမှာတော့ သူရဲ့သားကြီး ဂေဘရီရယ်ဟာ သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲ စစ်ထဲကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ တားမရတဲ့သားကို လက်လျှော့လိုက်ရပြီး ကျန်သားသမီးတွေကို စောင့်လျှောက်နေရင်း တနေ့ သူအိမ်နားမှာဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုတပ်တွေနဲ့ ဗြိတိသျှတွေရဲ့တိုက်ပွဲမှာ သားဖြစ်သူက ဒဏ်ရာရလာခဲ့ပါတယ်။ သားဖြစ်သူကို ဒဏ်ရာကို ကုသပေးပြီး နှစ်ဖက်ထိခိုက်သူတွေကို ပြုစုပေးနေချိန် ဗြိတိသျှ မြင်းစီးတပ်က သားသတ်သမားလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး တာပင်တန်ရဲ့လက်ချက်ကြောင် သူ့ရဲ့အစားထိုးမရတဲ့သားကို ဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ အင်မတန်ဒေါသကြီးပြီးရက်စက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ ဘင်ဂျမင်တယောက် တော်လှန်ရေးကြီးထဲပါဝင်လာရပြီး ပြည်ထောင်စုတခုဖြစ်ဖို့ တပိုင်းတစကူညီရပါတော့တယ်။ Mel Gibsonရဲ့ Brave Heart နဲ့ ...
IMDB: 7.2/10 235,458 votes